यी ३ अक्षरबाट नाम सुरु भएका युवतीले पाउँछन् धनी पति, कतै तपाई त पर्नुभएन ? – Sandesh Press
September 5, 2021 305
काठमाडौँ । विवाह गर्ने सपना त हरेक युवतीको हुने गर्दछ । युवतीले आफ्नो लागी पार्टनर आँफै नै खोज्ने गर्दछन् र पहिला नै एक लामो लिस्ट बनाएर राखेका हुन्छन् कि मेरो सपनाको राजकुमार कस्तो होला भनेर ?
यस लिस्टमा हरेक युवतीको सपना हुन्छ कि उनलाई पैसावाला पति नै मिलोस् । हामीले देख्ने गरेकै छौँ कोही यस्ता पनि हुन्छन् कि पैसावालाको लागी आफ्नो ब्वाइफ्रेन्डलाई छोडेर पैसावालाको पछि लागेका हुन्छन् भने कोही बाध्यताले या घरपरिवारको इच्छाले विवाह गर्ने गर्दछन्।
हरेक महिलाको चाहाना हुन्छ कि उसलाई एक राम्रो जीवनसाथी मिलोस् जसले उसको हरेक कुराको ख्याल गरोस्, उसको सपना पुरा गरिदियोस्।
आज हामी तपाईलाई बताउन जाँदैछौँ यस्ता ३ राशिको बारेमा जसले धनी र राम्रो जीवनसाथी पाउने गर्दछन्।
ए(A) अक्षरबाट नाम आउने युवती
ज्योतिषशास्त्रको अनुसार जुन युवतीको ना ए बाट सुरु हुन्छ भनिन्छ उनीहरुको भाग्यमा एक राम्रो र धनी श्रीमान मिल्छ । जसले आफ्नो पत्नीको सानो सानो खुशीलाई पुरा गर्न सक्दछ र उनीहरुलाई सँधै खुशी राख्न सक्षम हुन्छ ।
साथै यीनका पतिको स्मार्ट लुक,बोल्नेको अन्दाज र सकरात्मक व्यवहारले हरेक कोहीलाई प्रभावीत बनाउँदछ । र सबैभन्दा राम्रो त यो हो कि यस्तो अन्दाज जीवनभर नै रहने गर्दछ । यीनिहरु अरुको लागी कहिल्यै बद्लिदैनन् ।
आर(R) बाट नाम आउने युवती
जयोतिषशास्त्रअनुसार जुन युवतीको नाम आर अक्षरबाट शुरु हुन्छ उनलाई एक धनीको साथसाथै सजग स्वभाव भएको पति पनि मिल्ने गर्दछ जसले आफ्नी पत्नीलाई रानी सरह बनाएर राख्ने गर्छ ।
उनलाई कहिल्यै पनि दुख आउन दिदैनन् । जुन युवतीको नाम यस अक्षरबाट सुरु हुन्छ उनीहरुको भाग्य अरुको भन्दा कम हुँदैन। उनीहरुलाई आफ्नो पतिबाट हरेक खुशी मिल्ने गर्दछ जुन उनीहरुले सपनामा सोचेका हुन्छन् ।
एस(S)बाट नाम सुरु हुने युवती
ज्योतिषशास्त्र अनुसार जुन युवतीको नाम यस अक्षरबाट सुरु हुन्छ उनीहरुको किस्मत पनि उतीनै राम्रो हुने गर्दछ र यस्ता युवतीलाई पनि सबैभन्दा धनी पति नै मिल्ने गर्दछ । यी नामका युवतीलाई उनका पतिले बहुतै माया र खुशी दिने गर्दछन् ।
यस्ता युवतीलाई एक धनी पति मात्रै होइन बल्कि बहुतै माया गर्ने पति मिल्छ । जसले यिनीहरुको सानो सानो खुशीलाई पुरा गर्न सक्दछ । भनिन्छ कि जब मान्छेसँग पैसा हुने गर्दछ उसले जसलाई पनि खुशी राख्ने गर्दछ।
नमन भारत हिन्दीबाट नयाँ पुस्ता डटकमका लागि अनुवाद गरिएको सामाग्री
Prevके हो पर्सनालिटी ए ? यस्ता ब्यक्तिलाई हुन्छ हृदयघातको खतरा
Nextसिद्धार्थ शुक्लाको ३ महिनापछि बिहे हुने तय थियो, इंगेजमेन्ट भइसकेको थियो (हेर्नुस भीडीयो)
ब्यारेकमा गो ली ला गेकी महिला सैनिक जवानको मृत्यु